အမေးအဖြေများ - ရှန်ဟိုင်း Pamaens နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အများစုမှာထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းတိကျသော parameter သည်ပေါ် မူတည်. နေကြသည်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အဖြစ်မကြာမီသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင် get အဖြစ်စျေးနှုန်းစာရင်းကိုးကားပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့စုံလင်သောထုတ်ကုန်သို့သင့်ရဲ့ကြီးမြတ်ဒီဇိုင်းကိုဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, သင်တန်း၏, သင့်ရဲ့အထူးဒီဇိုင်းလုံးဝလျှို့ဝှက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ကောင်းသောဒီဇိုင်နာကိုယျ့ကိုယျကိုဖြစ်ကြသည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အချို့သောထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့် RoHs အများစုများအတွက်အီးစုံထောက်နှင့်အီးအတည်ပြုချက်ကိုရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအာမခံကဲ့သို့သောအခြားပို့ကုန်စာရွက်စာတမ်းများ; မူလအစကသင်၏တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ပေးနိုငျသညျ။
နမူနာအဘို့, ခဲအချိန်အကြောင်းကို7ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအဘို့, ခဲအချိန်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-20 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ (1) ငါတို့သည်သင်တို့၏သိုက်ရရှိထားသည့်အခါဦးဆောင်ကြိမ်ထိရောက်သောဖြစ်လာနှင့် (2) ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အဘို့သင့်ကိုနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲအဆသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မထားဘူးဆိုရင်, သင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကူးပါ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုစိတ်ကြိုက်နေကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ကြိုတင် 100% ငွေပေးချေမှုပိုနှစ်သက်ပေမယ့်အမိန့် value.We T / T, PayPal ကအနောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုနှင့်အလီဘာဘာကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ပေးချေမှုကိုလက်ခံပေါ် မူတည်. ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများပေါ် မူတည်. တစ်ဦးကနှစ်နှစ်။